Njikọ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOT
Home/Banyere Tekna Hyperbaric/Njikọ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOT
Njikọ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Agwọ HBOTteknamfg2018-01-04T18:19:33+00:00
ACHM bụ onye ọrụ ọkachamara na-etinye aka na itinye aka n'ọrụ, ụkpụrụ nke nlekọta, agụmakwụkwọ, ọzụzụ, ịgba akwụkwọ, na mmata nke hyperbaric oxygen ọgwụgwọ dị ka ọkachamara ahụike pụrụ iche.
E guzobere Ụlọ Akwụkwọ American College of Hyperbaric Medicine na 1983 na nkwado nke ndị dọkịta na-eme hyperbaric ọgwụ nke ghọtara na ọgwụgwọ ọgwụgwọ dị mkpa dị na ngwa ngwa, karịsịa nchịkwa ọnyá.
Dijitalụ Alert Network
Ọgwụ DAN ozi ndị ọrụ gọọmentị na-eme ihe ngosi ngwa ngwa nke 24-hour ma bụrụ ndị ọkachamara na nchụpụ ikuku, ịkọ ihe ọmụma nkà mmụta ọgwụ na ndị nlekọta ahụike.
Nchọpụta na nyocha bụ usoro ọmụmụ nke nkọwa sayensị. The Rubicon Foundation na-amalite ọrụ ndị na-eme ka mgbasawanye nke nghọta mmadụ.
Medicine Hyperbaric Caribbean
Medicine Hyperbaric Caribbean dere ma na-eduzi ihe ọmụmụ hyperbaric ise (National Board of Diving) na Hyperbaric Medical Technologies na American College of Hyperbaric Medicine). Ndị dọkịta na ndị ọkachamara na-ahụ maka nlekọta ahụ ike na-eji usoro ọmụmụ ndị a eme ihe iji mee ka ha nwee ike inweta ọgwụgwọ hyperbaric nke a chọrọ ka ha nye ọgwụgwọ hyperbaric maka ndị ọrịa.
Caribbean Hyperbaric Medicine na-enyekwa ihe ọmụmụ 12 nke Diver's Alert Network (DAN)
Ọgwụ Ahụike Hyperbaric Society
Ozi nke Medicine Society Hyperbaric Society bụ ịmepụta sayensị na iji ọgwụgwọ ọrịa na-agwọ ọrịa na ụmụ mmadụ na-agwọ ọrịa site na nkwado nke agụmakwụkwọ, nchọpụta, na mmekorita.